Soy Sauce-NANTONG CHITSURU FOODS CO., LTD.
Torohevitra 5 tokony ho fantatrao alohan'ny hisafidianana saosy soja
Azontsika atao ny mampiasa ny soja isan'andro, fa ny sasany amintsika kosa tsy mahalala na inona na inona momba ny fisafidianana soja, androany avelao izahay hanolotra toro-hevitra vitsivitsy ho anao.
Ny tantaran'ny saosy soavaly
Toy ny sakafo soja hafa, ny soja dia manana tantara lava ampiasaina sy mahaliana amin'ny sakafo maro, indrindra ny sakafo any Shina, Japon, Korea, Vietnam, Thailand, Burma, Indonezia, ary Filipina. Ny Sinoa ......
Sate Sauce misy voaoza sy saosy Fangaro masira
Araka ny fantatsika rehetra, ny soja soja dia tokony nahandro tao anaty telo ka hatramin'ny enim-bolana. Na izany aza, ny saosy soja afangaro dia mila folo ora fotsiny! Tsy mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly izany ary manimba .....
Fangaro masira dia nasiana enim-bolana
Samuel Wells Williams, Sinologist lehibe, dia nanoratra tao amin'ny 1848 fa ny soja tsara indrindra natony tao Chine dia “natao tamin'ny maintso mangatsiaka, nampidiriny varimbazaha na vary orza, ary nandao .....
Fitafihan'ny soja amin'ny fandrahoan-tsakafo
Ny saosy soja dia tsy ho an'ny sakafo japoney ihany, fa ampiasaina amin'ny karazana fahandroana rehetra. Na ho fanomanana mialoha, fandrahoan-tsakafo, na fahatsiarovan-tena, dia manisy sira soja kely fotsiny.
Ahoana ny fisafidianana ny saosy tsara indrindra, na ny Tamari?
Nihalehibe aho dia nampifangaro saosy soja miaraka amin'ny vera sy sushi mifangaro. Tsy nampiasa an'io matetika ny ray aman-dreniko satria masira loatra. Fa amin'ny olon-dehibe, ny soja dia nanjary nifandray tamin'ny umami, na ny .....